Ukholifulawa - iwumkhiqizo emangalisayo engasetshenziswa kokubili ngokwehlukana futhi njengengxenye yanoma yikuphi dish, isaladi. Pheka ke - nemnandi: kuyashesha futhi kulula. Kulesi sihloko sizoxoxa indlela ukupheka ukholifulawa phambi ukuthosa, kanye ekuzimiseleni eligcwele.
pan (ubukhulu incike isibalo inflorescences, okuyinto wena uhlose ubilise, kungcono ukuthatha capacitive);
ukholifulawa (uma kochanchiki amancane, bese dweba akungenxa ngokwanele ukuba umane unciphise emlenzeni, futhi uma izithelo ezinkulu - ke ngobumnene ukuhlukanisa efihlekile komunye nomunye);
Ngakho, thatha ukholifulawa nokuhle yami ke ahlukaniswa amahlamvu, uma ngabe zikhona. Ngokulandelayo, sithathele isimo: noma ulishiye lonke noma wahlukanise florets. Ngasikhathi sinye, thina uthele amanzi pan ngendlela yokuthi iklabishi eyayifihliwe ngokuphelele (inflorescences okwamanje ayifake amanzi), futhi ngomlilo. Lapho nje ibila, engeza usawoti bese efakwa preform yethu. Umlilo ngesikhathi esifanayo ukwenza isilinganiso, ukugwema ukungcoliswa amapuleti kanye nezitsha. Indlela ukupheka ukholifulawa phambi ukuthosa? Uma umgomo wethu - pre-aphathe yemifino ngaphambi kokuyibuyisela ku pan ke isikhathi akuyona anendingeko enkulu. It is "uhhafu kuphekwe" isimo ngokwanele. Indlela ukupheka ukholifulawa phambi ukuthosa? Hhayi imizuzu engaphezu kwemihlanu. Ngemva kwalokhu yemifino Kunconywa ukususa ekushiseni kanye uxubha ngaphansi kwamanzi abandayo kwi-colander. Iklabishi ilungele yokuwugazinga olwengeziwe. Ungakwazi Roll inflorescence e breadcrumbs Fry kwabo ezinhlangothini eziningana epanini ukuthosa upheke Batter (ufulawa amaqanda).
Kungakanani ngempela okufanele ukupheka ukholifulawa?
Esikhathini isimo, uma Fry zemifino esikhathini esizayo kuyoba khona uhlelo, isibonelo, bambeke smoothie ke isikhathi kuyoba kancane ehlukile kunaleyo esimweni sokuqala. Okungukuthi, udinga ukupheka iklabishi fresh kusuka imizuzu 10 kuya ku-15 (kuye ngokuthi ubukhulu inflorescences: lokho abayikho, kulapho kuyodingeka ukugcina imbiza phezu komlilo). imifino eqandisiwe uzilungiselele nokuthi eside - imizuzu 15-17. Okubalulekile: eneqhwa umkhiqizo ngaphambi ukupheka ayidingekile.
isikhathi esingakanani ukupheka ukholifulawa e multivarka?
Cishe emhlabeni 15 imizuzu.
Lapho uthenga, zama ukukhetha amakhanda wonke iklabishi emhlophe. ebusweni Okuxekethile ebonisa ukuthi umkhiqizo isikhathi eside walala phezu counter, niyise hhayi zinkulu.
Geza ukholifulawa futhi kudingeka emva ukuhlukana kube florets.
Uma upheka kungcono ukusebenzisa i epanini koqweqwe lwawo.
Uma ufuna ukugcina iklabishi emhlophe (emva ukupheka ke ulahlekelwa yikho), amanzi lapho uya ubilise, engeza ubisi. Ingxenye: inkomishi eyodwa kwezine zawo ubisi litre amanzi ngamunye.
Thola uma iklabishi usulungile, kungenzeka usebenzisa ummese ezivamile: uma uya ngaphandle nangaphakathi kalula, ngakho umlilo kungacinywa.
Ngakho, manje wazi indlela ukupheka ukholifulawa phambi ukuthosa. Sithemba ukuthi lolu lwazi kuyoba usizo kuwe, futhi wena pamper obathandayo a zokudla okumnandi unothile ngamavithamini kanye ivuthwa kahle.
Indlela ukupheka khinkali: isayensi ukuphila.
Inconnu: luhlobo luni lwenhlanzi, indlela ukulungiselela? Inconnu: zokupheka ngezithombe. Ukulungiselela zezinhlanzi ezimhlophe kuhhavini
Simila ku esibelethweni
Porto Palace Ihhotela 5 * (iGreece, Thessaloniki): incazelo ehhotela, imisebenzi, ukubuyekeza
Waffles okumnandi. Indlela I-waffle Soviet